चम्कि रहने ति तारालाइ
साेध्न मन लाग्छ ,
कहाँ हुनुहुन्छ भनेर ?
मूत्यु पछि सबै तारा बन्छन् अाकाशमा ।
म लालायित छु भेट्न
मेरी हजुर अामा ।
ति ताराहरूकाे गाउँबाट मुस्कुराउँदै
अाे हाे कति राम्री
कति उज्याली देबदुत
चाैबन्धि ढाकाकाे चाेलाे
सेताे पटुका बाँधेकी
सेतै फुलेकाे केशराशीभरि
गुराँशकाे फुल सिउँरेकी,
जवान मेरी हजुर अामा ।
तपाँइ कहाँ बस्नु हुन्छ ?
स्वर्ग मा कि अाकाशमा
चिन्ता लाग्थ्याे ,
मूत्युपछि पनि दुःख पाे पाउँनु भाेकि ?
कि भेदभाब छ
त्याे लाेकमा पनि
छाेरा र छाेरी बिच ?
छाेरीले दिएकाे दागबति
बाँचुन्जेल गरेकाे सेबाले
कतिकाे खुशि हुनुहुन्छ ?
भन्दिनुहाेला हजुर बुबा सँग
त्याे लाेकमा भेट भयाे भने
कतिकाे खुशि हुनुहुन्छ उहाँ
छाेराले दिएकाे पिन्ड पानी खाँएर
कतिकाे स्वस्थ हुनुहुन्छ ?
साेध्नु हाेला ,
अबश्य साेध्नु हाेला
मेरी हजुर अामा
हजुर बुबासँग ।